राजनीतिक डिस्कोर्समा गाउँ - चन्द्रकिशोर
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ताराजनीतिक डिस्कोर्समा गाउँ - चन्द्रकिशोर
Saturday, 16 July 2016 11:10	Rate this item
नयाँ जमिनदारहरूबाट मुक्ति, ऋण प्रक्रियामा सुधार, सीमान्तकृतहरूको सशक्तीकरण, जलसञ्चयको सुरुआत र उपलब्ध जलाशयहरूको संरक्षण, किसानसँग जोडिएका सवालहरूको सहजीकरण, ज्येष्ठ नागरिकाको संरक्षण, ग्रामीण पलायनलाई गाउँभित्रै रोक्ने जस्ता सवालहरू महत्त्वपूर्ण हुन् । “म गाउँमा बस्छु” भन्नु हीनताबोधको परिचय बन्नुहुन्न ।
फगत निर्वाचनका लागि निर्वाचन गर्ने कि अबको नेपालमा गाउँलाई कस्तो रूपमा राख्ने ? गाउँलाई कसरी थेग्ने ? संस्कृतिसँग जोडिएका सामाजिक संस्कारहरूमा सुधार कसरी गर्ने ? समाजको पुनर्संरचनालाई गाउँमा कसरी मूर्तरूप दिने ? नवविकसित वर्चस्वशाली जमातबाट सामाजिक शक्ति जनसाधारणतिर कसरी सार्ने ? नयाँ सामाजिक आस्थाहरू निर्माण हुँदै जाँदा पुराना बन्धनहरूलाई के कसरी भत्काउने ? गाउँको शक्ति वितरण र उसको सीमाड्ढनको एकाइ के हुने ? यी सवालहरूको बारेमा फराकिलो भुइँसतह संवाद नगरेसम्म गाउँमा लोकतन्त्र पुगेको मानिंदैन । व्यवस्था सङ्घीय हुने बित्तिकै, सरकार प्रान्तको बन्ने बित्तिकै राजनीति गाउँमुखी बन्ने होइन । गाउँमुखी राजनीतिका केही मुक्त चरित्र हुन्छन्, जसले त्यहाँका बासिन्दालाई व्यवस्था र बदलावप्रति हृदयमा भरोसा जगाउन सकोस् । गाउँमा लोकतन्त्र नपुगेसम्म माथिका संरचनाहरू जति गरे पनि ढलमलमा नै रहन्छ । अबको समयको हाँक र माग भनेको शासन सोझै जनताको पहुँचमा हुनुपर्छ । http://www.prateekdaily.com/2016/07/blog-post_462.html श्रोत बाट	Read 424 times	Last modified on Saturday, 16 July 2016 11:19	Tweet
« मधेशको माग मधेशीको मात्र होइन, राष्ट्रको माग हो, खिमलाल देवकोटा, प्रवक्ता, नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी मधेश आन्दोलनमा नयाँ शक्ति पार्टीको ऐक्यबद्धता रहेको छ फेरिएको राजनीतिक अवस्था र मधेसवादीको भुमिका - अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव »